Kedu ihe bụ OAuth na gịnị kpatara o ji dị mkpa? | Site na Linux
Azụ bụ ụkpụrụ a na-emeghe nke ewepụtara na njedebe nke 2007 nke na-akọwa usoro nke na ngwa weebụ (onye ahịa) nwere ike ịnweta ozi nke onye ọrụ na onye ọzọ (onye na-eweta ya) na-enweghị ịgwa onye mbụ aha njirimara na paswọọdụ.
Ka anyị were ya na anyị chọrọ ịme ihe ngwa ụdị "n'ụlọ peeji nke onye ọrụ", nke ọ nwere ike itinye foto ya na Flickr. Maka nke a, anyị ga-eji Flickr API, anyị ga-ajụ onye ọrụ maka aha njirimara na paswọọdụ anyị ga-edozi ihu akwụkwọ ahụ. Ọ bụ n'ụdị ọnọdụ ndị a ka Azụ ezi uche, nkwukọrịta n'etiti ngwa weebụ nke enwere ike ịnweta data njirimara. Echiche bụ na ngwa ndị ahịa (na ihe atụ a, ibe obibi anyị) enweghị ohere ịnweta aha njirimara na paswọọdụ onye ọrụ. Yabụ, Oauth bu usoro eji amata ihe site na API na nwepu onwe ya. Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na ọrụ ndị ọrụ Gmail ma ọ bụ Hotmail na-arịọ gị ka ị nye gị nke a ma ọ bụ arụmọrụ ahụ, ị ​​ga - ahụrịrị ebe uru bara uru dị ka Azụ.
N'ezie enwere otutu ụkpụrụ emechiri emechi na-eme nke a, dịka ọmụmaatụ Google AuthSub ma ọ bụ Flickr na Facebook API, mana echiche dị n'azụ Azụ bụ ijikọ ọnụ na ọkọlọtọ na-emeghe ka ụdị nkwukọrịta a n'etiti ngwa weebụ (nke ọma, onye ahịa nwere ike ịbụ web ma ọ bụ desktọọpụ) anaghị akọwapụta ya site na usoro nkwekọrịta.
Mmadu chere ozugbo Mepee, ma Azụ Ọ naghị edochi ọkọlọtọ a maka njirimara onye ọrụ, kama ọ na-emeju ya. N'ezie, ndị ọrụ anaghị "ahụ" ihe ọ bụla metụtara Azụ, nke dị na ọkwa nke nkwukọrịta n'etiti ngwa. N'ezie, ọtụtụ n'ime amara nke Azụ bụ na onye ọrụ na-achịkwa ihe data ngwa ndị ọzọ na-enweta. N'ịga n'ihu na ihe atụ nke Flickr, enwere ike guzobe ụdị foto ọ bụla ee yana ihe na-esite n'aka ndị na-eweta ọrụ na ndị ahịa enweghị ike ịnweta ihe ọ bụla.
Dị ka eziokwu dị omimi, n'azụ Azụ enwere Pownce, Twitter, SixApart, Jaiku, Flickr, Ma.gnolia na Google, tinyere ndi ozo.
Ozi ndị ọzọ na gị ukara na saịtị, nke nwere blog.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Kedu ihe bụ OAuth na gịnị kpatara o ji dị mkpa?
Ezigbo ozi. Daalụ maka inye anyị nkọwa izugbe banyere ihe ọ bụ. N’oge na-adịghị anya, m ga-eji OAuth maka ngwa android m. Daalụ
Nkanka nke ahụ, ọhụrụ Puzzle game maka Linux